Na-atụgharị uche, taa, na obi umeala gị n'ihu Chineke | Ilblogdellafede
Na-atụgharị uche taa maka ịdị umeala n'obi gị n'ihu Chineke
Ma nwanyị ahụ bịara fee ya ofufe, na-asị: "Onyenwe anyị, nyere m aka." Ọ zara na nzaghachi, "Ọ bụghị ihe ọjọọ ịnara nri ụmụaka tụbara ya nkịta." Ọ si, Biko, Onye-nwe-ayi, n’ihi na ụmụ nkịta na-erikwa nri ezumike nke dị na tebụl ndị nwe ha. Matiu 15: 25-27
Jizọs ò gosipụtara na inye aka nwanyị a dị ka ịwụnye nkịta nri? Anyị ga-akpasu ihe iwe n'ihi ihe Jizọs kwuru, maka mpako anyị. Ma, ihe o kwuru bụ eziokwu ma na-akparị ya n'ụzọ ọ bụla. O doro anya na Jizọs enweghị obi ọjọọ. Agbanyeghị, nkwupụta ya nwere akụkụ ebumpụta ụwa nke ịkpa arụ.
Ka anyị burugodị ụzọ leba anya n’otú ihe o kwuru si bụrụ eziokwu. Jizọs nọ na-arịọ Jizọs ka ọ bịa gwọọ nwa ya nwaanyị. Jizọs gwara ya na ya anabataghị amara a. Nke a bụkwa eziokwu. Ọbụghị nkịta kwesiri ka enye ya nri site na tebụl ka anyị kwesịrị ịnata amara nke Chineke Ọ bụ ezie na nke a bụ ụzọ na-awụ akpata oyi n'ahụ iji kwuo ya, Jizọs na-ekwu ya n'ụzọ a iji buru ụzọ gosi eziokwu nke mmehie anyị na ọnọdụ ọjọọ ekwesighi. Nwaanyị a wee were ya.
Nke abụọ, nkwupụta Jizọs nyere ohere ka nwanyị a mee ihe na obi umeala na okwukwe. A na-ahụ ịdị umeala n'obi ya n'eziokwu ahụ na ọ gọnarịghị na nkịta na-eri ihe na tebụl. Kama, o wedara onwe ya ala na nkịta na-erikwa nri ezumike. Chei, nke a bụ umeala! N’ezie, anyị ji n’aka na Jizọs gwara ya okwu n’ụzọ a na-emechu mmadụ ihu n’ihi na ọ maara ịdị umeala n’obi ya, marakwa na ọ ga-eme ya site n’ikwe ka ịdị umeala n’obi ya gosipụta okwukwe ya. Eziokwu ahụ dị ala nke erughị eru ya wutere ya; utu ke oro, enye ama adaha ye enye onyụn̄ oyom akwa mbọm Abasi kpa ye oro enye mwokenyeneke.
Dị umeala nwere ikike ịtọpụ okwukwe, okwukwe na-emekwa ka ebere na ike nke Chineke ghara ịdị. Na njedebe, Jizọs kwuru okwu ka mmadụ niile nụrụ, "Nwanyị, okwukwe gị dị ukwuu!" E gosipụtara okwukwe ya ma Jizọs jiri ohere ahụ sọpụrụ ya maka okwukwe ahụ dị umeala.
Na-atụgharị uche taa n'ịdị umeala n'obi gị n'ihu Chineke, olee ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Jizọs agwawo gị otu a? Ga-ewedata obi gị niile iji mata na ị baghị uru? Ọ bụrụ otu a, ị ga - enwe okwukwe zuru ezu iji kpọkue ebere Chineke n'agbanyeghị enweghị ike gị? Àgwà ndị a dị ebube na-aga ụkwụ na ụkwụ (obi umeala na okwukwe) ma na-emeghe ebere Chineke!
Nna m ukwu, erughị m eru. Nyere m aka ịhụ ya. Nyere m aka ịhụ na erughị m amara gị na ndụ m. Mana n'eziokwu eziokwu ahụ, m ga - amata ọtụtụ ebere gị ma ghara ịtụ ụjọ ịrịọ maka ebere. Jesus m kwere na gị.
← Na post gara aga Gara aga post:Vatican: enweghị nchegbu 'maka ahụike Benedict XVI
Ọzọ Post → Post ozo:Ọgọstụ 5, ncheta ọmụmụ Nwanyị nwanyị anyị, anyị na-achọ gị mma n’ekpere a